Filestage: Rongedza Video Yako Annotation uye Ongororo Maitiro | Martech Zone
Mugovera, Mbudzi 21, 2015 Svondo, November 22, 2015 Douglas Karr
Isu tanga tichishanda pavhidhiyo inotsanangura mavhiki mashoma apfuura, uye yanga ichifamba zvakanaka chose kunyangwe ichiunza pamwechete mapoka mashanu etarenda - mutengi, munyori script, muenzanisi, mutambi, uye izwi pamusoro petarenda. Izvo ndizvo zvakawanda zvinofamba zvikamu!
Mazhinji maitiro acho anotumirwa kubva kune imwe sosi kuenda kune imwe apo isu tichifamba nenzira yacho kuitira kuti igone kunetsa. Pakati peyakavanzika, password-yakachengetedzwa Vimeo kutsikisa, maemail, uye chirongwa chehurongwa hwehurongwa, tiri kubhururuka tichitenderedza uye nenzira yekuita tichipedzisa chirongwa.
Pachirongwa chedu chinotevera, tinogona kungonyoresa Filestage! Filestage iri online vhidhiyo kududzira uye yekudzokorora chishandiso. Iyo ndiyo nzira iri nyore yekugovana, kuongorora uye kubvumidza zvemukati midhiya nevatengi vako uye vashandi pamwe navo. Filestage inotsigira mavhidhiyo, dhizaini, marongero, mifananidzo uye zvinyorwa. Yese data yemutengi inochengetwa uye yakachengetedzwa zvakachengetedzwa pamhepo.
Sezvauri kuona kubva muvhidhiyo, chikuva chinoteerera uye chiri nyore kushandisa. Zvakanakisisa pane zvese, zviri nyore kutsanangura mavhidhiyo panguva yepuremu uye nenzvimbo chaiyo pachiratidziri. Filestage irikungokwikwidza saka zviri mahara kushandisa kusvika kupera kwegore. Saina uye uipe pfuti! (Zvitore?)
Tags: filestageonline videoyepamhepo vhidhiyo yekuongorora chishandisovhidhiyo chidimbuvideo review
Kuyera Kwevatengi Kubatanidzwa Kwechokwadi-Nguva kuburikidza neIzwi Maitiro Ekuongorora
Mbudzi 29, 2017 na10: 59 PM
Ini ndanga ndichizonyora kuti ndikuudze nezve izvi, asi ndakafungidzira kuti iwe wakatozvinzwa nezvazvo. Ndanga ndichishandisa izvi kwemwedzi ikozvino, uye zvinotyisa! Ndinozvida.
Nov 30, 2017 pa12: 18AM